Qubeyska iyo Shaqooyinka Jirka Ayaa Soo Bandhigay Shaxdooda Halloween - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Qubeyska iyo Shaqooyinka Jirka Ayaa Soo Bandhigay Shaxdooda Halloween
Qubeyska iyo Shaqooyinka Jirka Ayaa Soo Bandhigay Shaxdooda Halloween
Waxay ahayd usbuucii la soo dhaafay oo keliya Target waxay bilaabeen inay ku iibiyaan badeecadooda Halloween goobtooda. Hadda Qubeyska iyo Shaqooyinka Jirka waxay soo bandhigeen noocyadooda kala duwan ee xilliyada xilliyeed ee udgoon.
Bath and Body ururinta waxaa ka mid ah shumacyada la filayo, kareemada iyo nadiifiyeyaasha gacanta. Laakiin waxaa jira waxyaabo yar oo madadaalo leh sida nalalka habeenkii iyo waxyaabo kale. Way adag tahay in la yiraahdo waxa aan jecel nahay maxaa yeelay waxaan si aad ah ugu mashquulsan nahay shumacyo mowduuc leh. Laakiin, dhiiga vampire wuxuu umuuqdaa mid qabow.
Sidaan horeyba u soo sheegnay, Target waxay dhawaan soo daabacday alaabtoodii Halloween. Kuwani horeyba way iibinayaan. Waa wax aad u qurux badan haddii aad tixgeliso in Oktoobar wali wax yar uun ka fog tahay. Waan ka mahadcelin karaa jacaylka aan u qabo xitaa. Waxyaabo badan oo xilliyeedku soconayo inta sanadka ka hartay aniga ahaan. Xaqiiqdii, marka Kirismasku yimaado waxaan badanaa arkaa aniga oo isku daraya qurxintaas waxyaabaha waaweyn ee Halloween. Hada aruurintan Bath and Body Works gurigeygu wuxuu urayaa udgoon iyo xilliyeed inta sanadka kaharay.
Maxay yihiin qaar ka mid ah waxyaabaha aad ugu jeceshahay aruurinta Qubayska iyo Jirku? Saqbadh Boo Liinta? Bocorka Wanaagsan? Ugaarsiga Farxada leh? Noo soo sheeg xulashadaada qaybta faallooyinka.
Qubeyska iyo Shaqooyinka JirkashumacyoHalloweenDhiigga Vampire
Kevin Smith's 'Killroy was Here' Trailer wuxuu helaa Nice iyo Gory
Habeennadii Argagaxa ee Halloween oo La Joojiyay Universal Orlando iyo Hollywood